Kwụsị Email bufee na Unroll.me | Martech Zone
Ọnwa ole na ole ọ bụla, achọrọ m ịgafe ozi ịntanetị m ma bido wepụchaa ihe niile. Site na nyiwe nwalere m, na ọkwa mmekọrịta na akwụkwọ akụkọ - igbe m juru n'ọnụ. Ana m eji ụfọdụ ezigbo ngwaọrụ iji nyere aka jikwaa ya, dịka Ozi, ma ọ ka dị ntakịrị nchịkwa.
Unroll.me dị ebe a iji nyere gị aka ịmaliteghachi ịchịkwa igbe mbata gị. Kama ịnata ọtụtụ ozi ịntanetị ndenye aha ụbọchị niile, ịnwere ike ịnata naanị otu. Ee, anyị kwuru otu. The Rollup agwakọta gị họrọ ndebanye aha na-ahazi ha n'ime otu adaba kwa ụbọchị mgbari email. Gịnị banyere ozi ịntanetị achọghị? Naanị otu pịa, wepu aha na spam ọ bụla mara ihe a kpọrọ mmadụ. N'ezie.
Mgbe m debanyere aha maka Unroll.me, a ga m amata ihe kpatara igbe mbata m ji eri mmiri… ha chọpụtara ndebanye aha dị iche iche 190! Unroll.me na-enye m ohere ịtụgharịa ozi ịntanetị m chọrọ ka m na-eme kwa ụbọchị, na-anabata, email email ma ọ bụ wepu aha na mpempe akwụkwọ niile m na-amaghị na e debara aha m!
Tags: emailndenye aha emailjikwaa ndenye ahaịdenye ahawepuwepu aha